आँशु खसाल्दै डुबान पीडितले भने – छोराछोरी भोकभोकै छन्, खुवाउने केही छैन [भिडियोसहित]
काठमाडौं –घरभित्र बाढी पसेपछि भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी लगायत क्षेत्रका वासिन्दा समस्यामा परेका छन् ।
घरभित्र भएको सामग्री जोगाउनुपर्ने तनाव सँगसँगै खानपिनको जोहो गर्ने चिन्ताले समेत सर्वसाधारणलाई सताएको छ । खानपिनको चिन्ताले सताएका थुप्रै सर्वसाधारणमध्ये पर्छन्, भक्तपुरको सिर्जनानगर वस्तीका नेत्र खत्री । बाढीले खत्रीको घरभित्र भएको सबै खाद्यान्न बाढीले भिजाएको छ ।
बाढीको समस्याले खत्री आफू त भोकै बस्न सक्छन् । तर, छोराछोरीले ‘भोक लाग्यो’ भनेर गरिरहेको आग्रहले उनको आँखाबाट आँशु नै खस्यो । लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै खत्रीले भने, ‘छोराछोरी भोकभोकै छन्, खुवाउने केही छैन ।’ घरभित्र पानी पस्दा खत्रीको घरभित्रका धेरै सामान भिजेका छन् ।
बुधवार राति परेको भीषण वर्षाका कारण हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुरको मध्यपुर क्षेत्र डुबानमा परेको छ । बाढीका कारण भक्तपुरका जगाती र बाराही स्थानका बस्तीमा पानी पसेको छ भने भूकम्पपीडितको शिविर डुबानमा परेको छ । मध्यपुरकै राधेराधे र कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र रहेका वस्ती डुबानमा परेका छन् ।
बाढी र पहिरोका कारण भक्तपुरमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । वर्षाले चाँगुनारायण नगरपालिका–७ तेलकोटस्थित मजुवामा आएको पहिरोले १ टहरो पुरिँदा एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
असार २८, २०७५ मा प्रकाशित
नयाँ मर्यादाक्रममा सेनाको आपत्ति, समायोजनमा जाने प्रहरीको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि
एसईई परीक्षा निरीक्षणमा मन्त्रीको दादागिरी : केन्द्राध्यक्षको जागिर खाइदिने धम्की !
संसद्को नमूना बैठक : राष्ट्रपतिमा आचार्य र उपराष्ट्रपतिमा बस्नेत
कार्यकर्ता फकाउँदै कांग्रेस नेता - हार भयो भन्दैमा नआत्तिनुस् काठमाडौँ - नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले हार भयो भन्दैमा नआत्तिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । इलाम सदरमुकाममा पार्टीले आयोजना गरेको अन्तरक्रि...
सरकारको धरपकड तीव्र, कालिकोट जनसरकार प्रमुख बारुदसहित समातिए
मनमोहन अधिकारीको विचारले पार्टीलाई कालान्तरसम्म फाइदा हुन्छ - रक्षामन्त्री पोखरेल
यात्रामा सलिनमान यात्री, मलिना दृष्टिविहिन गायिका, सलोनको भूमिका के ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया सिफारिश